Nhau - Kubva munaGunyana 1, China ichatora mubatanidzwa pamwe nemutoro wakawanda wekugashirazve zvigadzirwa zvepurasitiki zvakatumirwa kubva kuChina
Kubva munaGunyana 1, China ichatora mubatanidzwa pamwe nemitoro yakati wandei yekutambira zvakapetwa zvakare mapurasitiki akaunzwa kubva kuChina
Mumakore maviri apfuura, marongedzero emarara epamba akaitwa, uye marara marara uye kumashure-kumagumo marara akasimbiswa.
Mangwana izuva repamutemo rekugamuchidza iro nyowani uye rekare "mutemo wakasimba wemarara". Kubva mangwana, pateni yepurasitiki yakadzokororwa kupinza inonyorwazve. Mune ramangwana, kugaya kwemarara zvigadzirwa muChina ichave iyo yakajairika maitiro!
Parizvino, kumiswa kwekupinzwa kwemapurasitiki akashandiswazve nemamwe makambani anotumira kwakakonzera hurukuro muindasitiri. Iyo yakakosha poindi ndeyekuti ivo vachatakura pamwe chete uye akati wandei mutoro wekutora zvakadzokororwa epurasitiki zvidimbu zvakatengwa kubva kuChina.
Makambani ane bhizinesi akakodzera anochinja makambani avo ekutumira. Nekudaro, iko mafungiro emakambani makuru ekutakura achakanganisa makambani ekutumira kuti vateedzerewo? Zvichiri kusazivikanwa.
Kutakura kweCOSCO kuchamhembe kweAmerica kwakazivisa kuti yaizomira kugamuchira tsvina yakasimba inotakurwa kuenda kumawere eChina kubva munaGunyana 1. Zvinonzwisisika kuti izvo zvinodiwa zvinoshanda kune zvese zvinhu zvakashata zvemarara, zvinosanganisira mapepa emarara, simbi yakasviba, mapurasitiki, marara emarara, machira emarara , nezvimwe.
Kubva pakurambidzwa kwemarara, iyo yekumisikidza mutemo gadziriso uye yakabatana zviyero zvezvinhu zvakadzokororwa epurasitiki zvimisikidzo zvakakwezva kutariswa kweindasitiri.
Dzimwe tsananguro dzemarara dzinoenderana nekucherechedzwa kwemuganhu, asi zvidimbu zvinorambidzwa, izvo zvinomutsa mubvunzo wekurambidza kupinzwa kwemapurasitiki akadzokororwa.
Sezvo iwo "mutemo wakasimba wemarara" mutsva uchitaura zvakajeka kuti nyika ichaona zvishoma nezvishoma kutakura kwemarara kwakasimba, ichiwedzera chirango chemarara akasimba zvisiri pamutemo, uye zvijekese kuti mutakuri nemutengesi vanozobata mhosva dzakabatana (zvimwe zvisiri pamutemo inogona kubhadhariswa mari inopfuura 500000 yuan uye isingasviki 5000000 yuan), mutemo mutsva wedhara wakasimba unotanga kushanda munaGunyana 1, 2020.
Ichinetswa neizvi, makambani anotakura anotya kana kuti achabatanidzwa pamwe chete uye nemhosva. Parizvino, COSCO Shipping Company chete ndiyo yakanzwa chirevo chakapihwa neCOSCO Shipping. Parizvino, Sinotrans, Yangming, evergreen, imwe, CMA uye mamwe makambani makuru ekutakura anounza zvekare mapurasitiki, asi mabhizimusi akadaro haana kuita zvirevo zvinoenderana.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti sechigadzirwa chakapedzwa, izvo zvimisikidzwa zvimisikidzo hazvisi marara akasimba.
Izvo zvichaitika mune ramangwana ndezvekuti nekuzadzikiswa kwemutemo mutsva "wakasviba wemarara", zvidimbu zvakatengwa zvakaderera zvichabviswa zvishoma nezvishoma kubva munyika, uye mhando dzekunze dzakapinzwa kunze kwenyika ndidzo dzichava sosi huru.
Asi ikozvino, tichitarisa chokwadi chekuti hapana chakabatana nyika chiyero chekupinzwa kwepurasitiki yakadzokororwa, mukuru webhizimusi rekunze nekutengesa kunze kwenyika achiri kuda kungwarira.
Izvi zvinotevera zvinhu zvinoda kutarisirwa kwekupinza granule Enterprises:
1. Izvo zvinodikanwa kuve nepfungwa yenjodzi uye uve nekunzwisisa kwakazara kwezvinhu, kunyanya avo vane njodzi huru yekuunza kunze, senge zvivakwa, maratidziro, mavara uye zvinhu zvikuru zvezvinhu zvakashandiswazve;
2. Kana paine kusahadzika pamusoro pehunhu hwezvinhu, tsika dzinofanirwa kutanga dzabvunza inoenderana inoongorora agency;
3. Kana tsika dzikasimudza mubvunzo uye ndokutumira iwo masosi kubazi rekuzivisa kuti rionekwe, zvinodikanwa kuti ubatanidze kukosha kukuru kwekushandira pamwe nebasa rekutora kuti uwane sampuli yakaenzana uye inonzwisisika;
4. Kana paine gakava repamutemo, chirango chekutonga kana kudzikisira chiyero, zvinokurudzirwa kutanga wabvunza gweta wobva wagadzirisa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu. Kana zvichidikanwa, zvakafanira kuchengetedza kodzero dzayo chaidzo nezvido kuburikidza nekutarisisa kwehutongi uye kutonga kwehutongi.
Hushi Industrial Park, Huashi guta, Jiangyin Guta, Jiangsu Province, China, 214421.
Anoumba zvinhu (Jiangsu) was selecte ...
Kubva munaGunyana 1, China ichatora pamwe ...
Nyowani Antibacterial Polyurethane inobatsira Poresa ...